ငုံးဥ - Hmwe Food Industry
မွှေးဆန်ကျက်မှုန့်ဖြင့် အသားကင်မျိုးစုံကို တို့စားရန်နှင့် သုပ်စားရန်အတွက် အချဉ်ရည်ဖျော်စပ်နည်း
Home / Healths / ငုံးဥ
ငုံးဥမှာ ပရိုတင်း၊အဆီ၊သံဓာတ် လက်စီသင် (Lecithin)၊ ဗီတာမင် အေ၊ ဘီဝမ်း၊ ဘီတူး (Vitamin A, B1, B2)၊ ကယ်လ်ဆီယမ် (Calcium)၊ ဆိုဒီယမ် (Sodium)၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် (Magnesium)၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ ကိုလက်စထရောတွေ လုံလောက်စွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်းနဲ့ အူလမ်းကြောင်းနာခြင်း၊ ဝနေတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပေးခြင်း၊ သွေးကြော ကောင်းမွန်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွေးကြောမှာ သွေးခဲခြင်း၊ သွေးခဲတာကြောင့် သွေးဖတ်ပိတ်ခြင်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ငုံးဥစားခြင်းက ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ သွေးအားနည်းတဲ့သူ၊ ချူချာတဲ့သူနဲ့ မီးဖွားပြီးခါစ မိခင်လောင်းတွေအတွက်တော့ အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ငုံးဥဟာ သန္ဓေသားနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အားကောင်းစေတာမို့လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ငုံးဥကို များများ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်ကို အားကောင်းစေပြီး နှလုံးသွေးကြောရောဂါသည်တွေရဲ့ အားဖြည့်အစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်သွေးကြောနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရောဂါရှိတဲ့သူတွေကတော့ ငုံးဥကို ပမာဏများစွာ မစားသင့်ပါဘူး။
ငုံးဥ စားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး (၃) လုံးကနေ အများဆုံး (၅) လုံးထိပဲ စားသုံးဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။
ငုံးဥနဲ့ လိမ္မော်သီးကို တွဲစားမိရင် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်ခြင်းနဲ့ အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ငုံးဥကို ဝက်အသည်းနဲ့ တွဲစားမိရင်လည်း လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး အမည်း စက်တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပဲ ကြော် (သို့) ပဲကပ် ကြော်
No. 002, Building (77/79), Ground Floor
18th Street, Latha Township,
+95 1 251 387, +95 1 250 770, +95 1 250 663
No. 258(B), 294-295, Ground Floor
Nyaung Pin Lay Market Plaza, Lanmadaw Twonship,
Copyright © 2019 Hmwe Food Industry. All Rights Reserved. Created by